မိခင်လောင်းတို့ စားသင့်သည့်ငါးများ -
February 28, 2019 Myat Moe Aye0Comments ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း
အမေ၇ိကန် စားသောက်ကုန်ကြီးကြပ်ေ၇းအဖွဲ့မှ မိခင်လောင်းများအတွက် လမ်းညွှန်မှုအသစ်များကို ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
မှန်ကန်သည့် ငါးအမျိုးအစားကို စားသုံးပေးခြင်းက ကျန်းမာေ၇းအတွက် အထောက်အပံ့များစွာ ၇၇ှိစေပါတယ်။ မိခင်လောင်းများနှင့် နို့တိုက်မိခင်များဟာ ပြည်ကြီးငါး ဆာဒင်း ဆဲလ်မွန် ကမာကောင်များကို တပတ်မှာ ၈အောင်စမှ ၁၂အောင်စထိ စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ယင်းငါးများမှာ EPA အမြင့်ဆုံးပါဝင်ပြီး မာကျူ၇ီ အနိမ့်ဆုံးပါဝင်ပါတယ်။
တူနာ ငါးမန်း မက်က၇ယ် ငါးများမှာ မာကျူ၇ီပါဝင်မှုနှုံးများလို့ေ၇ှာင်ကြဉ်၇ပါမယ်။ အိုမီဂါသ၇ီးပါဝင်သည့် ဆေးဝါးများကို သောက်သုံးခြင်းနှင့် ငါးများကို စားသုံးပေးခြင်းက တူညီတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးမရှိပါ။ အိုမီဂါသ၇ီးက ဥာဏ်၇ည်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ကျန်းမာသည့် အာ၇ုံကြောဆက်နွယ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း. Accessed: 27 February 2019.
← ပါ၇ာစီတမော်လ်သောက်သုံးတဲ့ မိခင်လောင်းများမှာ အပြုမူချို့ယွင်းချက်၇ှိသည့် ကလေးများမွေးလာဖွယ်၇ှိ